महानगरको ३ वटा वडामा फोहोरको स्रोतमै बर्गीकरण गर्न सुरु - WASHKhabar
महानगरको ३ वटा वडामा फोहोरको स्रोतमै बर्गीकरण गर्न सुरु
८ भाद्र २०७६, आईतवार ११:०४ 354 पटक हेरिएको
काठमाडौ : काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. १२, १८ र २१ मा आजदेखि फोहोरको स्रोतमै बर्गीकरण गर्न थालिएको छ । लामो समयको तयारी पछि महानगरपालिकाले आजदेखि जैविक (कुहिने) र अजैविक (नकुहिने) फोहोरलाई छुट्टा छुट्टै दिनमा संकलन गर्ने भएको हो । यो योजना लागु गर्नु अघि महानगरपालिकाले सम्बन्धित वडाका बासिन्दालाई फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न सचेतनात्मक कक्षहरु सञ्चालन गरेको थियो ।
फोहोरको स्रोतमै छुट्याउने कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै काठमाडौ महानगरपालिका, वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउन फोहोर उठाउने सफाइकर्मीलाई पनि सजिलो हुने, सम्बन्धित घरधनीले फोहोर मार्फत अतिरिक्त रकम आर्जन गर्न सक्ने र फोहोर समेत कम हुने बताउनुभयो ।
घर तथा होटल, पसलमा उत्पादन भएको फोहोर एउटै प्लाष्टिक झोलामा हालेर चोक वा सडकमा फाल्ने अहिलेसम्मको अभ्यासलाई परिवर्तन गरी अब घरमै फोहोर छुट्याएर राख्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘अब गल्ने फोहोर र नगल्ने फोहोरलाई घरमै छुटाएर राख्नुहोस्, नगल्ने फोहोर आफैले कवाडीलाई बेच्नुहोस्, गल्ने फोहोर महानगरपालिकाको गाडीलाई पठाउनुहोस्, हामी त्यसलाई मल बनाउँछौं ।’ वडाका बासिन्दासँग उहाँको आग्रह थियो ।
विगतमा जस्तै सबै एकै ठाउँमा मिसाएको फोहोर महानगरले संकलन नगर्ने र उल्टै कार्वाही गरिने उहाँले बताउनुभयो । भिजिट नेपाल २०२० लाई सफल बनाउन पनि हाम्रा सम्पदाहरुलाई सफा राख्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । ‘त्रिभुवन विमानस्थलको गेट, पशुपतिनाथ, हनुमानढोकाको गेटमा फोहोर फालेर हामीले पर्यटकलाई कस्तो सन्देश दिईरहेका छौं ? अब हामी आफैले बुझ्न जरुरी छ । हामीलाई मन नपर्ने फोहोरको थुप्रो कसलाई मन पर्छ ? हामीले यसैगरी फोहोर उत्पादन गर्दै जाने हो र व्यवस्थापनमा ध्यान दिएनौं भने सिसडोल र बञ्चरेडाँडा जस्ता ल्याण्डफिलसाइट जत्ति नै बनाए पनि फोहोरको लागि ठाउँ हुने छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
सचेतना र्‍याली सहित नगर परिक्रमा
जथाभावी फोहोर नफाल्नर फोहोरको स्रोतमै बर्गीकरण गर्न आग्रह सहितको र्‍यालीले नगर परिक्रमा गर्‍यो । वडा नंं १८ को कार्यालयबाट निस्केको र्‍यालीले ताम्सीपाखा, रक्तकाली, नरदेवी,टेङगल परिक्रमा गरी किलागल पुगेर अन्त्य भएको थियो ।
र्‍यालीको नेतृत्वका गरेका वडाध्यक्ष न्यूहुच्छेकाजी महर्जनले अबदेखि चोक तथा सडकको गल्लीमा फोहोर नफ्याँकी महानगरपालिकाको गाडीलाई मात्र पठाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कुहिने फोहोर संकलन गर्ने दिन हरियो स्टिकरवाला गाडी आउने र नकुहिने फोहोर संकलन गर्ने दिन रातो स्टिकर भएको गाडी आउने बताउनुभयो ।
जथाभावी फोहोरमैला फ्याँक्ने विरुद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन बमोजिम कारवाही अगाडि बढाईने र यस्तो कारवाहीबाट बच्न आफूले उत्पादन गरेको फोहोर घरबाटै छुट्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
र्‍यालीका क्रममा घर अगाडि फोहोर थुपारेको घरमुलीसँग उहाँले अब देखि सडकमा फोहोर ननिकाल्न आग्रह समेत गर्नुभयो । फोहोरमैला कम भन्दा कम उत्पादन गर्न आग्रह गर्दै उहाँले महानगरपालिकाको यो अभियान फोहोर न्यूनीकरणकै लागि भएको बताउनुभयो ।
‘हामीले फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउन थाल्यौं भने फोहोर कम हुन्छ, संकलन गर्नेलाई पनि सजिलो हुन्छ, अन्त्यमा ल्याण्डफिल साईटमा फाल्नुपर्ने फोहोरको परिमाण अति नै कम हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
यस अघि हरेक घरले सडकमा थुपारिएको फोहोर महानगरपालिकाको गाडीले उठाउने गरिएको थियो । अब कोही कसैले सडकमा फोहोर थुपार्न नपाइने र घर घरबाटै फोहोर संकलन गरिने वडा अध्यक्ष महर्जनले बताउनुभयो ।
र्‍यालीका थप फोटाहरु: